ဝါခေါင်မိုး: တစေ့တစောင်း ခမာတို့ရဲ့ တိန်း(ဂ်)မောင်း
Posted by မအိမ်သူ at 12:00 AM
မမရဲ့ ခရီးသွားမှတ်တမ်းလေးကို ဖတ်ရတာ ကိုယ်တိုင် ရောက်ခဲ့ရသလိုပဲ...ခေမာလူမျိုးတွေ အကြောင်း တစ်စေ့တစ်စောင်း ခုမှပဲ သိခွင့်ရလို့ ကျေးဇူးပါမမ..:)
လယ်ကွင်းနဲ့ ထန်းတောက မြန်မာပြည်ရှုခင်းအတိုင်းပဲနော်။ ဒီရှုခင်းလေးတွေကို မြင်နေရရင် မအိမ်သူတော့ မြန်မာပြည်ကို သိပ်လွမ်းစရာ မလိုဘူး ဟန်ကျတာပဲ။
၀ိညာဉ်ခြောက်ရုပ်ဆိုတာ ခုမှကြားဖူးတယ်။ တရွာတပုဒ်ဆန်း သူ့အယူနဲ့သူပဲနော်။ အရုပ်တွေကလဲ ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးပဲ၊ ဘောင်းဘီနဲ့ ခါးပတ်နဲ့ ခေတ်တော့အမီသား။
မသိသေးတာလေးတွေ သိရတာ ဗဟုသုတရတယ် မအိမ်သူရေ ... ကိုယ်တွေက အဲဒီနေရာတွေ သွားချင်မှ သွားနိုင်မှာလေ။
ကျွန်မကလည်း ခုလို ကိုယ်မသိသေးတဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ပိုစိတ်ဝင်စားမိတယ်
စွမ်းအားတစ်မျိုးတွေ ကိန်းအောင်းနေတဲ့ စာခြောက်ရုပ်တွေက တစ်ချို့ပုံတွေ လန့်ဖို့ကောင်းတယ်
စာခြောက်ရုပ်တွေက ဝိဥာဉ်ခြောက်ရုပ်ဆိုတော့ မော်ဒန်ဆန်တယ်။း) ခမာကျတော့ ဘယ်လိုသွားရမလဲမသိဘူး။ မရောက်ဖူးသေးဘူး။ သွားချင်လိုက်တာ မအိမ်သူရယ်။ တအားကို ပျော်စရာကောင်းမှာပဲနော်။
ကမ္ဘောဒီးယားကိုတော့ အလည်တစ်ခေါက်ရောက်ချင်တယ်၊ မြန်မာပတ်စ်ပို.က ဗီဇာလိုမလားမသိဖူး၊
ခမာတွေ အကြောင်းဖတ်ရတာ ကောင်းလိုက်တာ
ZZZ >>> ဗီဇာလိုပါတယ်ရှင်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘောဒီးယားက Arrival Visa ပေးပါတယ်။ သိပ်မခက်ပါဘူး။ ကမ္ဘောဒီးယား သံရုံးက ဗီဇာကြိုယူလာခဲ့ရင်တော့ ပိုအဆင်ပြေတာပေါ့။ အ၀င်မှာ အလုပ်ရှုပ်သက်သာတာပေါ့နော်။ အလည်ဆိုရင် ဒေါ်လာ နှစ်ဆယ် နဲ့ Business Visa ဆိုရင် ဒေါ်လာ အစိတ် ကျပါတယ်။
ရှုခင်းများကိုခံစားရင် ဗဟုသုတတွေပါ ရလိုက်တဲ့ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ....
မအိမ်သူရေ Angkor-wat ဖက်ကိုရောက်ပြီးရောပေါ့နော်။ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်တွေ နေဝင်တာကို ကြည့်ကြတယ်ဆိုလို့ အန်တီတို့လည်း သွားကြည့်တာ ပုဂံကနေဝင်ဆည်းဆာက ပိုလှသလိုပဲ။
ခုမှပဲ ဒီဘလော့ဂ်ကို စဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျမက စာဖတ်သူသက်သက်ပါ။ comment တွေဘာတွေလဲ ဘယ်မှာမှမရေးဖူးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျမကိုယ်တိုင် Cambodia မှာ ၂နှစ်ကျော်လောက် အမျိုးသားအလုပ်လုပ်ရာဒေသမှာ လိုက်နေဖူးတော့ ဒီဘလောဂ့်ကို ဖတ်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ အဲ့ဒီမှာနေခဲ့ဖူးတဲ့အချိန်တွေကို သတိရမိပါတယ်။ ခမာတိုင်းပြည်အကြောင်း အလွမ်းပြေ တွေ.ရဖတ်ရတဲ့အတွက် အော့ကွန်းပါလို.ပြောချင်ပါတယ်။
အပေါ်ဆုံးပုံတွေဆို မပြောရင် မြန်မာပြည်ဘဲ ထင်မိမှာ။
ခရီးထွက်ရတာ ကျနော်လည်း သဘောကျတယ်။ မမြင်ဖူးတဲ့ ပါတ်ဝန်းကျင်တွေကို မြင်ရတာ နှစ်သက်ဖို့ကောင်းတယ်။ ဘလော့ဂ်တွေရဲ့ အားသာချက်က ဒါပဲနဲ့တူပါရဲ့။ ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နိင်ငံအကြောင်းလေးတွေ ပြန်မျှဝေရင်းနဲ့ အားလုံး အသိတွေ တိုးရစေတယ်။ သိပ်ကောင်းပါတယ်။ ဒီလို သုတမျိုးပေးတဲ့ ပို့စ်များ များများဖန်တီးဖို့ အားပေးပါတယ်။
June 30, 2011 7:18 AM
ဗဟုသုတ ရတဲ့ ပို့စ်လေးပါပဲ မအိမ်သူရေ...၊ ဟုတ်တယ် နော်၊ ဓါတ်ပုံလေးတွေအရ ရှုခင်းတွေက မြန်မာပြည်နဲ့ အတော်လေး တူတာပဲ၊ ဝိညာဉ်ခြောက်ရုပ်တွေရဲ့ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု ကိုတော့ သဘောကျသွားတယ်..။
July 01, 2011 6:16 AM
Sure Sdey Bong!
ညီမ ဆီရမ်ရိ နဲ့ ဖနွမ်ပင်တေ့ာ ရောက်ဖူးတယ်..
စာခြောက်ရုပ်တွေ တစ်ခါမှမတွေ့ဖူးဘူး.. ခုမှ အထူးအဆန်းဖြစ်နေတယ်။ Countryside မှာပဲ ရှိတာလား အမ။
Sure Sdey Bong!!
ညီမ ဆီရမ်ရိ နဲ့ ဖနွမ်ပင်ရောက်ဖူးတာ တစ်ခါမှ စာခြောက်ရုပ် မတွေ့ဖူးဘူး အမ။ ခုမှ အထူးအဆန်းဖြစ်နေတယ် ။ Countryside မှာပဲရှိလို့ဖြစ်မယ်နော်။